Ukuphupha kweNombolo 4 Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kumaphupha ethu siphila kwiimeko ezahlukeneyo, sineemvakalelo ezahlukileyo, ngamanye amaxesha siyadideka kwaye sibona izinto ekuboneni kokuqala ezingenanto yakwenza nobomi bethu bokwenyani. Amanani nawo angadlala indima kumaphupha ethu, nokuba asibakhathalelanga kwaye babonakalise uphawu lwabo, mhlawumbi sitsho nokuthiya izibalo njengesifundo esikolweni.
Njengomfanekiso ephupheni, inani lisoloko limele umyalezo ovela kwi-subconscious. Umzekelo, ukuba inombolo yesi-4 okanye indibaniselwano ezine zivela ephupheni, oku kufanele ukuba kutsalele ingqalelo yakho kwisiganeko esibalulekileyo esiwela kwikota elandelayo yenyanga. Ngamanye amaxesha ikwayinombolo yendlu okanye inombolo yefowuni esingasokuyikhumbula kubomi bemihla ngemihla. Kwangelo xesha, enye yezinto ezine kunye nentsingiselo yazo kuhlalutyo lwamaphupha zinokuqondwa ngokufuziselayo.
Nangona kunjalo, inani lesine linokuba neentsingiselo ezinzulu. Ke inokucacisa okomfuziselo ogqitha kwimihla kunye neenombolo ezilityelweyo. Inombolo 4 ingatolikwa njani kwezi meko?
1 Uphawu lwephupha «inombolo 4» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inombolo 4» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inombolo ye-4» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «inombolo 4» - ukutolikwa ngokubanzi
Kutoliko jikelele lwamaphupha, inani lesine lihlala lithathwa njengophawu lwalo ulungelelwano y uzinzo. Umntu ochaphazelekayo sele ephumelele okuninzi ebomini bakhe, ngakumbi kwinqanaba lobungcali, kwaye unokucothisa umngcelele kwinqanaba langoku lobomi. Udale indawo ekhuselekileyo.
Oku kuyasebenza nakwimiba yezemali. Eli lixesha lokonwabela iziqhamo zomsebenzi wakho kwaye ujonge ngakumbi kunxibelelwano lwakho olunokungahoywa.
Nabani na ophupha ngenombolo yesi-4 kunokwenzeka kakhulu ngqo kakhulu Isimo, ujongana nezinye izinto ngendlela ethandabuzekayo. Kungenxa yesi sizathu le nto kubaluleke kangaka ngoku ukuba ucime umzamo oqhubekayo wokufezekisa kwaye uzinikele ngokupheleleyo kwinkxalabo yabahlobo kunye nosapho. Ukuphupha kufunyenwe kwaye ngoku ungazonwabela kolu "phumlo."
Inani lesine lihlala lingumqondiso weempawu eziphambili, izinto kunye namaxesha onyaka. Ke ngoko, ikwimeko yesayensi kwaye, njengomfanekiso wephupha, ngumdla omkhulu wabanomdla kwi uhlobo kwaye bavakalise izinto zendalo.
Abo bawabonayo amaxesha amane kumava abo ephupha banokuzibona benethamsanqa: mpu melelo izakuvela kungekudala. Oku kuhlala kuhamba nezibonelelo zemali. Ummangaliso unokulinda umntu oleleyo. Ukuba umntu ophuphayo ngequbuliso unamehlo amane, umphuphi ngoku ukhathazeke kakhulu ngemeko yobomi bakhe; Kwangelo xesha, unokuba nesigqibo esibalulekileyo phambi kwakho.
Ukudlala iquartet kungaphaya kwemeko yamaphupha ingqalelo ukuthatha imeko yayo. Ukuba abantu abane bavela kumava ephupha, besenza i-quartet kunye, umntu oleleyo kungekudala ufumana umzuzu wobuhlobo obunzulu kunye nokuthembana. Ikamva elisondeleyo kunokwenzeka ukuba lizise uvuyo olukhulu.
Ukuba i-combo-piece combo yenza umculo njengebhanti okanye iqela elincinci, umntu ochaphazelekayo uya kujongana nento ephantsi kwenqanaba labo.
Uphawu lwephupha «inombolo 4» - ukutolikwa kwengqondo
Nokuba ngokwendlela yokusebenza kwengqondo, inani lesine litolikwa njengophawu lwe uzinzo. Apha, oku kusebenza ikakhulu kubomi babucala. Umntu ekuthethwa ngaye udale indawo ekhuselekileyo kwaye ukhululekile kwimeko yabo yentlalo.
Kwangelo xesha, iingcali zengqondo ziqonda inani le-4 ephupheni njengesalathiso Iimpawu zobuntu. Imele ukomelela komlinganiswa, ukweyisela, ukuthembeka kunye namandla. Nangona kunjalo, umphuphi kufuneka alumke angafuni ukunyanzelisa izimvo zabo zemveli ngokuzingisileyo. Ngamanye amaxesha, iindlela ezintsha kunye neendlela zokuyila ziyafuneka.
Isikwere esinamacala amane alinganayo ahlala ebonisa i-psychic elungileyo emaphupheni. Ibhalansi lowaphuphi. Ubuntu bakhe kunye nethuku zakhe ziphila ngokulinganayo.
Uphawu lwephupha «inombolo ye-4» - ukutolika kokomoya
Ngokombono wokomoya, inani lesine lifuzisela ephupheni. Ingcwele nokugqibelela.